ဗန်းစကားလေးတွေ ပြောကြည့်ရအောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ဗန်းစကားလေးတွေ ပြောကြည့်ရအောင်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Feb 24, 2012 in Education, How To.. | 32 comments
ဒီနေ့အဖို့ ကျနော်တို့ ရွာမှာ အသုံးတွင်ကျယ်တဲ့ စကားလေးတွေ အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်။ စကားက နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗျ။ တစ်မျိုးက လူတိုင်း နားလည်တဲ့ စကားမျိုး။ တစ်မျိုးက လူငယ်တွေပဲ နားလည်တဲ့ စကားမျိုး။ အဲ … ပထမ အမျိုးအစားက မခက်ပေမယ့် လူငယ်တွေပဲ နားလည်တဲ့ စကားကတော့ နည်းနည်းလေးတော့ ရှုပ်တယ်။ ရှုပ်မှ လူကြီးတွေ မသိမှာကိုးဗျ … နော့ ။
ရွာမှာ လူအများစု သုံးနေတဲ့ စကားလုံး အချို့ကတော့ … ကိုယ့်မျက်စိထဲ သိပ်ပြီး ဘဝင်မကျတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ပြောတဲ့အခါ … “ဒီကောင်က အယိုင် ပါကွာ” လို့ သုံးပါတယ်။ အယိုင် … အယိုင်ကြီး ပါကွာလို့ ပြောကြတယ်ဗျ။ နောက်တစ်မျိုးကလည်း အယိုင်နဲ့ တူတူပဲ။ ဒီကောင်က “အယိုင်ကြီး” ၊ “အခြေပြုတ်ကြီး” … အဲလို သုံးတာပါ။
လူလတ်ပိုင်းတွေက လူငယ်တွေကို ပြောတဲ့အခါ … မနုဿ် လို့ သုံးတယ်ဗျ။ ” အဲဒီ မနုဿ် က ဟိုကောင်မလေးကို ကြိုက်နေတာကွ …” ။ ဘာကွ။ ညာကွ ပေါ့ဗျာ… ။ ဒါလေးတွေကတော့ တော်တော်ကြီးကို အသုံးတွင်ကျယ်တဲ့ စကားလုံး အချို့ပါပဲ။
လူငယ်တွေကြား သုံးတဲ့ စကားကတော့ နည်းနည်း ရှုပ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ သို့ပေသိ တတ်လွယ်ပါတယ်။ ရှုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း လူကြီးတွေအဖို့ နားရှုပ်တာကို ပြောတာပါ။ ကဲ .. ထားပါ။ နမူနာတစ်ခု ပြောပြမယ်။ တစ်ခုသော ညနေခင်း တစ်ခုမှာပေါ့။ အလုပ်တွေကတော့ အကုန်ပြီးသွားပြီ။ ရေတွေ ဘာတွေလည်း ချိုးပြီးသွားပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော့် ဘော်ဒါက အိမ်ကို ရောက်ချလာတယ်။ သူလာတာက ထန်းရည် သွားကစ်ဖို့ လာခေါ်တာ။ အဖေတို့၊ အမေတို့ကလည်း ရှိနေတော့ “ဟေ့ကောင် ထန်းရည် သွားသောက်ကြရအောင်” ဆိုပြီး ခေါ်လို့ မရဘူးလေ။ အဲလို ခေါ်လိုက်ရင် ကျနော် တွယ်ခံရမှာပေါ့။
ဒါနဲ့ ဒီငတိ (ငတိ ဆိုတာကလည်း လူတစ်ယောက်ကို သုံးနှုန်းတဲ့ အသုံးအနှုန်း တစ်ခုပါ) က ကျုပ်ကို လှမ်းပြောတယ်။ “ဟေ့ကောင်ရေ … ထူးရန်း ရူးရေ သူးရွား သူးရောက် ရူးရ အူးရောင်” ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ထန်းရည်သွားသောက်ရအောင်” ပေါ့။ ဒါက နမူနာပါ။
ဒီရွာထဲက နာမည်အချို့ကို ကျနော်တို့ ဘာသာစကားနဲ့ နည်းနည်း ပြောကြည့်ပါမယ် …. ။ နမူနာထဲ ပါတဲ့လူတွေကတော့ ကျနော့်ကို စိတ်ဆိုးနဲ့နော် …
ကျနော့နာမည် အံစာတုံး ကို ပြောမယ်ဆိုရင် “အူးရန် ဇူးရာ တူးရုံး” လို့ ပြောပါတယ်။
စိန်ပေါက်ပေါက် ဆိုရင် “စူးရိန် ပူးရောက် ပူးရောက်” လို့ ပြောတယ်။
ဖရဲသီး ဆိုရင် “ဖရူးရဲ သရူးရီး” ပေါ့။
ကြီးမိုက် ဆိုရင် “ကျူးရီး မူးရိုက်” ပေါ့ဗျာ။
ကိုပေ ဆိုရင် “ကူးရို ပူးရေ” ပေါ့။
ကိုဂီ ဆိုရင် ကူးရို ဂူးရီ …..
ဦးဘလက် ဆိုရင် အူးရူး ဘလူးရက် …
လေးပေါက် ဆိုရင် လူးရေး ပူးရောက် ….
သဂျီး ဆိုရင် သဂျူးရီ ….
ဦးကြောင်ကြီး ဆိုရင် အူးရူး ကြူးရောင် ကြူးရီး ….
မအိတုံ ဆိုရင် မအူးရိ တူးရုံ ….
အရီးလတ် ဆိုရင် အရူးရီး လူးရက် ……
( နမူနာ ပြောပြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်နော် … )
စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် သုံးကြတာပေါ့ဗျာ …….. ။ ဒီနေရာမှာ ရကောက် တွေကို ရကောက် အတိုင်း အသံဒဲ့မထွက်ပါဘူး။ စာထဲမှာဆိုတော့ ကျနော်လည်း ထွက်ပြလို့ ရဘူးဗျာ။ အနီးစပ်ဆုံး ပြောရရင် ပါဠိသံလိုလို၊ ရခိုင်သံလိုလို ထွက်တယ်ပေါ့ဗျာ။
နောက်ထပ် နမူနာလေးအချို့ကတော့ ….
ထမင်း …. ထမူးရင်း
ဟင်း … ဟူးရင်း
ရေ … ရူးရေ
မုန့် … မူးရုန့်
ချီးပါ …. ချူးရီး ပူးရာ
သေးပေါက် ….. သူးရေး ပူးရောက် ….
ကျနော့် တုန်းကတော့ ကျနော့် အကိုကြီး ဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်က ကျနော့် နာမည် ပေါင်းပြရင်းနဲ့ သင်ပေးခဲ့တာဗျ။ အခုလည်း နာမည် အတော်များများကို ပေါင်းပြ ပေးထားတယ်ဗျို့ … ။ ဒီလောက်ဆို ရလောက်ပါပြီဗျာ … ။
ဒါလေးတွေကတော့ ဒီနေ့အတွက် ကျနော် သိသလောက် ဗဟုသုတလေးကို မျှဝေတာပေါ့ဗျာ …. ။
တော်သေးပြီ … ။
ဟမ်…. … ဟမ် ….. ဟမ်……
daimler chrysler ကိုရောဘယ်လို ပြောလဲဟင်……
စနေ ဆိုတော့ စနူးရင်းပေါ့ …. ဟိဟိ
အရူးရီး လူးရက် ဆိုပါကလား..
ဒေါ်လေးကြီးမိုက် နံမယ် အကြိုက်ဆုံး..
“ကြီးမိုက် ဆိုရင် “ကျူးရီး မူးရိုက်” ပေါ့ဗျာ။”
မူးမှရိုက် ပေါ့ မမူးဘဲ ရိုက် ရင် ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲ….
အဲ့ဒါ စကားလိမ်တွေဗျ …
မူရင်း စကား ကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဖြည့်စွက် စကားလုံး ထည့်ပေါင်း တဲ့နည်းဗျ…
ကိုယ့် ဆြာ နည်း က
ကို ကြည့်ရင် ထကို လွှတ်ထားလိုက်ပြီး “မင်း” မှာ -ူးရ ဆိုတဲ့၂လုံးပေါင်းလိုက်တော့
ထ”မူးရင်း” ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ …
အ ကိုဖယ်လိုက်ပြီး ခြ နဲ့ က ကိုေ-ာ် ပေါင်းတဲ့နည်းဗျ..
နောက်တနည်းက ပေါင်းလည်းပေါင်း ဇောက်ထိုးလည်း လှန်တဲ့ နည်းဗျ…
ကို “အော်တကန် ဇော်တကာ တော်တကုန်း” ရေ့ …
စလုံးတလုံးစီရဲ့နောက်မှာ “တကော်” ထည့်ပေါင်းပြီး ပြောင်းပြန်လှန်တာဗျ…
ဘယ်က ဘယ်လို ပေါ်လာသလဲတော့ မသိဘူး …အခြာရှီဗောက် တွေ ပြောရင်တော့ …
သိပ်မြန်တာပဲ … နည်း သိနေတဲ့လူတောင် မီအောင် နားမထောင်နိုင်ဘူးရယ်….
(ရှီဗာ ပေါင်း ပြောင်းပြန်လှန်ထားသည်…)
ဒါတွေက ရန်ကုန် က အလယ်တန်း အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကြားမှာ အတော်လေး
တွင်ကျယ်ခဲ့သပေါ့ဗျာ ..(လွမ်းထှာ…ခုတော့ ဘယ်လိုနေသလဲမသိ …)
ကျနော် သိတဲ့ နောက်ဆုံးတနည်းကတော့ ဖြည့်စွက်စာလုံးကို နောက်က ပေါင်းတာမဟုတ်ဘဲ
ရှေ့ကပေါင်းပြီး ပြောင်းပြန်လှန်တဲ့နည်းဗျ …. .. သူက “ဟန်” လို့ ခေါ်တယ်…
(တီလုပ် ဟန် လူမျိုး မဟုတ်ပါ ..)
အဲ့စကားက သံပေါက်လိုလို လင်္ကာ လိုလို နဲ့ ရွတ်ရတာ အတော် ရီစရာကောင်းတယ်ဗျ…
နောက်ကပေါင်းပြီး လှန်တဲ့ လူတွေ (အသုံးများတွေ) ကြားမှာ နားမလည်စေချင်ရင်
ဒါနဲ့ ဆော်ရတာကိုး ဗျ….။
ပေါက်ဖော်မူးနေသည် ကို ရေးကြည့်ဗျာ ပီး ..ရွတ်ကြည့် ..ဟီဟိ…
ဟာနှန် ဟူးဘန် ဟိုင်းဂန် ဟုတ်ချန်
စနေတို့ ကျောင်းနေတုန်းက သုံးတာက တစ်မျိုး ….
အံစာတုံး – အယ်တံစယ်တာတယ်တုံး …..
မိစိန်ပေါက် အီးပန်းနေသည် – မယ်တိစယ်တိန်ပယ်တောက် အယ်တီးပယ်တန်းနယ်တေသယ်တည်…..
ဂီးသဂျိုင်း ဂီးအိုင်း ဂန်းပိုင်းနေသည်
ဂန်အိုင်း ဂါဇိုင်း ဂုံးတိုင်း ဂီးအိုင်း ဂန်းပိုင်းနေသည်
တကော် စကား စဖြင့်….
ရှီးအမ်း ရှာပန်း လိုက်ဦးမယ်..
ဖရဲသီး ဆိုရင် ဖရော်ရကဲသော်ရကီး
ကြီးမိုက် ဆိုရင် ကြော်ရကီးမော်ရကိုက်
ကိုပေ ဆိုရင် “ကိုက်ဒိုပိုက်ဒေ
ကိုဂီ ဆိုရင် ကော်ရကို ဂေါ်ရကီ
ဦးဘလက် ဆိုရင် အော်ရကူး ဘလောက်ရကက်
လေးပေါက် ဆိုရင် လိုက်ဒေး ပိုက်ရောက်
သဂျီး ဆိုရင် ဆီးသဂျန်
ဦးကြောင်ကြီး ဆိုရင် အော်ရကူး ကြော်ရကောင် ကြော်ရကီး
မအိတုံ ဆိုရင် မိုက်ရ အိုက်ဒိတိုက်ရုံ
အရီးလတ် ဆိုရင် ဆီးအရန်ဆတ်လန်
အဲဒါ ဘာသာစကား သုံးမျုိးနဲ့ပြောတာဗျာ
မ ဟိန်ရှုပ် တိန်ရှာ တိန်ရွှေ ပြိန်ရှော နိန်ရှေ ကျိန်ရှ တိန်ရှယ်။
ကိုအံစာတုံးရေ ၀င်ခေါက်သွားပါတယ်….. ပြောကြည့်မယ်နော်….အရူးအံစာတုံး…
အမလေးဗျာ မွေ့ လည်သွားပီ။
ဘယ်သူလိုက်မလဲ ဗျို့ ………
ထူးရန်း ရူးရေ သူးရွား သူးရောက် ရူးရ အူးရောင်
အိုးးးဟိုးးးဟိုးးးးး အခေါ်ကု မှ လော်ကာ ပြီး ပြောကော နေတယ်
သော်ကူ မြော်ကား တို့ တော်ကောင် ပြော်ကုန်း မှာ ဒေါ်ကာ တွေ ပြော်ကော နေတာ ကြော်ကာ လှပေါ့…
ကိုပေါက် ပြောတဲ့ “သဂျီး ဆိုရင် ဆီးသဂျန်”ဆိုတော့
သဂျီး ကို ဆီးသင်္ကြန် ကျပေးရမှာပေါ့နော်..ဟေ..ဟေး….ရေများများသောက်ထားမ:-)
သဂျီး ကို ဆီးသင်္ကြန် ကျပေးရမှာပေါ့နော်..ဟေ..ဟေး….ရေများများသောက်ထားမှ :-)
ကယ်တို အယ်တန် စယ်တာ တယ်တုန်း ရယ်တေ။
ဗယ်တန်း စကယ်တားဒယ်တွေ ပြယ်တော သလယ်တား— ၊
ဟိုက် … နောက်ထပ် စကားတွေလည်း အများကြီး ရလိုက်ပဟ …
နောက်တော့မှ စမ်းပြောကြည့်ရမယ် ..
နောက်ဆုံးတစ်ခွန်း ပြောလိုက်မယ် …
အူးရား လုံးရုံး ကူးရို ကျူးရေး ဇူးရူး တူးရင် ပူးရာ တူးရယ် …
ကိုပေါက်ရေ မာမီတွေက ဘယ်သူတုန်းဗျ။
အခုတလော သုံးနေပြောနေကြတဲ့ “ဂဒဘဲ” ဆိုတာ ဘာကြီးတုန်း ဘိုအံ ရေ ။ ဖြေပါဦးနော
“ကဒဘဲ” ဆိုတာ “တကယ်ပဲ” ကို ဆိုလိုတာနေမှာပါ …
အဟီး .. ရမ်းတုတ်လိုက်တာနော် …
မဟာရာဇာ အံဇာတုံး ရေ-(နာမည်က နည်းနည်းတောင် တိုသွားပြီ၊ ဘယ်ဆင်ဆာနဲ့ တွေ့တယ်မသိ)
အခုတောင် အသက်ရှုပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ခေါ်ရတယ်။
“အူးရန် ဇူးရာ တူးရုံး” လို့သာဆိုရင်တော့……..
နာမည်ခေါ်နိုင်အောင် ကိုယ့်သက်တမ်း အရင်စစ်လိုက်ပါဦးမယ်။
အနန္တ စကြဝဠာ မဟာရာဇာ အံစာတုံးဆိုရင် ဟောဟဲသံပါ ကပ်ပါလာလို့ အနန္တစကြဝဠာ ကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်တာပါ …
ဟိုစကားနဲ့ ခေါ်လို့ကတော့ အင်း .. ပြောတော့ပါဘူးဗျာ …
ဒို့သဂျီး ရီသလိုမျိုး ရီလိုက်တော့မယ်နော် ..
မူးရင်ရိုက်တက်တော့ ရှောင်နေရမှာပေါ့ ကြိုက်မီးရေ